Galaxy 20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max | Iindaba zeGajethi
IGalaxy 20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max
UIgnacio Sala | | Umfanekiso kunye nesandi
Isamsung yazisa okokuqala ukubheja kwayo kwisiphelo esiphakamileyo sehlabathi somnxeba oshukumayo ngesandla IGlass Z Flip nakuluhlu Galaxy S20, Uluhlu oluqukethe iimodeli ezintathu. Xa uthenga ii-terminals, ukuba ujonga olona luhlu luphezulu, kwintengiso namhlanje sifumana iindlela ezimbini ezinokubakho: I-S20 Ultra kunye ne-iPhone 11 Pro Max.
Asinakubandakanya I-Huawei Mate 30 Pro IHuawei, kuba ayiboneleli ngeenkonzo zikaGoogle, ke ukhetho olunokusinika ngokubhekisele ekusebenzeni zincitshiswe kakhuluNangona ezi zinokufakwa ngaphandle kwengxaki, nangona ayinguye wonke umntu onolwazi lokwenza njalo.
1 I-Galaxy S20 Ultra kunye ne-iPhone 11 Pro Max
2 Isikrini se-S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max
3 Iikhamera kunye nevidiyo
4 Amandla, i-RAM kunye nokugcinwa
6 Yeyiphi engcono?
I-Galaxy S20 Ultra kunye ne-iPhone 11 Pro Max
Eyona ndlela ikhawulezayo yokufumana uluvo lokuba i-Galaxy S20 Ultra kunye ne-iPhone 11 Pro Max zisinika itafile, itafile apho sinakho ngokukhawuleza ubone iimpawu eziphambili nganye kwezi terminals nokuba sidilizwa apha ngezantsi.
Isikrini 6.9 intshi AMOLED 6.5 intshi OLED
Isigqibo 3.200 × 1.440 iphe 2.688 × 1.242 iphe
Inkqubo ISpapdragon 865 / Exynos 990 A13 Bionic
Imemori ye-RAM 16 GB 4GB
Ukugcina ngaphakathi I-128-512 GB UFS 3.0 I-64-128-256 GB
Cámara trasera I-12 mpx i-angle ebanzi / inzwa ye-TOF / i-108 mpx ephambili / i-48 mpx yefowuni yokusondeza i-10x ebonakalayo kunye ne-100x hybrid I-12 mpx ububanzi / 12 mpx ukubanzi ngokubanzi / 12 mpx yefowuni 2x zoom
Ikhamera yangaphambili I-40 mpx I-12 mpx
Inkqubo yokusebenza I-Android 10 ene-UI 2.0 enye iOS 13
Ibhetri I-5.000 mAh-ixhasa ukutshaja okukhawulezayo nokungasebenzisi cingo I-3.969 mAh-ixhasa ukutshaja okukhawulezayo nokungasebenzisi cingo
Conectividad I-5G-iBluetooth 5.0 -Wifi 6-USB-C 4G - iBluetooth 5.0 - iWifi 6 - Unxibelelwano lombane
Khu seleko Inzwa yeminwe yeminwe phantsi kwesikrini I-ID yobuso
Ixabiso ukusuka kwi-1.359 euro (i-128 GB) ukusuka kwi-1.259 euro (i-64 GB)
Isikrini se-S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max
Ngelixa i-iPhone 11 Pro Max iqhubeka nokubheja, kunyaka wesithathu ngokulandelelana kwi inotshi yokudibanisa inkqubo yokwamkelwa kobuso, Isamsung isinika ukuba ukhethe ukutshintsha indawo yekhamera yangaphambili, ukuyisa kwiziko eliphezulu lesikrini (kwi-S10 bekukwicala lasekunene).
Iscreen se-iPhone sifikelela kwi-intshi ye-6,5 ngesisombululo se-2.688 × 1242 yohlobo lwe-OLED (enziwe yiSamsung) kwaye inenqanaba lokuhlaziya le-60 Hz. × 20 isisombululo kunye ireyithi yokuhlaziya ye-120 Hz.
Iikhamera kunye nevidiyo
I-iPhone 11 Pro Max ibe yindawo yokuqala ye-Apple yokuphumeza i-angle ebanzi, kungoko ukongeza kwiilensi ezimbini esele zinikezelwe iXS MAX yenza itotali iphelele:
I-12 mpx i-engile ebanzi
I-12 mpx engile ebanzi
I-12 mpx lens yefowuni ene-2x zoom zoom
Iifowuni ze-11 Max Pro zokurekhoda zevidiyo zikhawulelwe kwi-4K kwi-60fps
Isamsung, kwelinye icala, ikwasebenzisa Iikhamera ezi-3 kwi-Galaxy S20 Ultra kwaye ibandakanya inzwa ye-TOF ukulinganisa ubunzulu. Inzwa ephambili ifikelela kwi-108 mpx, i-angle ebanzi yi-12 mpx kunye ne-telephoto yi-48 mpx edibanisa ukusondeza kwe-10x kunye ne-100x hybrid zoom. Ukuba sithetha ngevidiyo, lonke uluhlu lweGPS S20 luyasivumela ukurekhoda iividiyo kumgangatho we-8k, mhlawumbi nge-30 fps kuba le datha ayichazwanga.
Amandla, i-RAM kunye nokugcinwa
Ngaphakathi kwi-iPhone 11 Pro Max, sifumana iprosesa ye-A13 Bionic, iprosesa efanayo esinokuyifumana kuzo zombini i-iPhone 11 Pro kunye ne-iPhone 11. I-Samsung ikwasebenzisa iprosesa efanayo kuzo zonke iimodeli eziyinxalenye yoluhlu olutsha 20, kodwa umahluko ngokwamazwekazi apho ithengiswa khona.
Ngelixa zombini iMelika ne China zisebenzisa iQualcomm's Snapdragon 865, eYurophu nakwamanye amazwe, iSamsung iphumeza i-Exynos 990, eyenziwe yinkampani yaseKorea. Kwithiyori, bobabini abaqhubekekisi banikezela ngokusebenza ngokufanayo, nangona kunjalo iprosesa yeQualcomm sIhlala inikezela ngokusebenza okungcono malunga nokusetyenziswa kwebhetri.
Ukuba sithetha nge-RAM, i I-iPhone 11 Pro Max ine-4 GB, ngaphezulu kokubonga okwaneleyo ngokudityaniswa ne-iOS 13, inguqulelo yamvanje ye-iOS ekhoyo namhlanje. Isamsung, eyinxalenye yayo, isinika ubumbeko lwe-RAM olwahlukileyo ngokuxhomekeka ekubeni imodeli yi-4G okanye i-5G. Ngelixa iimodeli ze-S20 kunye ne-S20 Pro 4G zilawulwa yi-8 GB ye-RAM, inguqulelo ye-5G ihamba ne-12 GB ye-RAM.
I-Samsung Galaxy S20 Ultra ifumaneka kuphela kuhlobo lwe5G kwaye ihamba ne-16 GB ye-RAM. I-Apple ayikhuphi akukho iPhone ngetekhnoloji ye5G.
Ukuba sithetha ngokugcinwa, iApple ibonisa kwakhona, omnye unyaka, loo nto inqabile kakhulu malunga nendawo yokugcina, kuba inguqulelo esisiseko iqala ukusuka kwi-64 GB, eneenguqulelo ze-256 kunye ne-512 GB. Isamsung, njengonyaka ophelileyo, isinika ingxelo esisiseko ye-128 GB, enokukhetha kwenye ye-512 GB kunye nethuba lokwandisa indawo yokugcina usebenzisa ikhadi le-MicroSD, ukhetho olunganikezwa yi-iPhone 11 Pro Max.
Inguqulelo yexabiso eliphantsi ye-iPhone 11 Pro Max yenxalenye ye- I-1.259 euro kwaye isinika i-64 GB ukugcinwa, ngelixa i-Galaxy S20 Ultra, kuhlobo lwayo lwexabiso eliphantsi, inxenye ye- I-128 GB yee-euro ezingama-1.359.
Zombini iiterminal zimnandi kwaye zisinika umgangatho kwicandelo lokufota kunye nevidiyo kunye nokunxulumene namandla kunye nokusebenza esingazukukufumana kwezinye iitheminali. Xa uthatha isigqibo kwisiphelo esinye okanye kwenye, kufuneka sithathele ingqalelo indalo esidale ekhaya.
Ukuba amalungu osapho lwakho asebenzisa i-Android, amathuba kukuba unesithethi esihlakaniphile esivela kuGoogle okanye kwiAmazon. Kule meko, olona khetho lufanelekileyo yimodeli yeSamsung. Nangona kunjalo, ukuba i-iPhone ibalasele ekhayeni lakho naphakathi kwabahlobo bakho, ngokucacileyo lolona khetho lulungileyo lokuhlala ngaphakathi kwesangqa yi-iPhone 11 Pro Max. Khetha i-terminal oyikhethileyo, ngokuqinisekileyo awuyi kudana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » IGalaxy 20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max
Uyilawula njani indlu yakho uchitha imali encinci